နယူး CL215 လုံးဝအလုပ်မလုပ်
နယူး CL215 လုံးဝအလုပ်မလုပ်2နှစ်ပေါင်း3months ago #1048
ငါသည်ဤလေယာဉ်တစ်စင်းကိုချစ်ရုံကဒီမှာ Rikoooo မှာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာကြည့်အသံ, အကြီးအပျံပေမယ့်ငါခတ်, ဂီယာအလုပ်လုပ်မရနိုင်ပါ။ ရှိသမျှသည်အခြားသောထိန်းချုပ်မှုမျက်နှာပြင် ok ဖြစ်ကြသည်။ ငါ Controller options များ check လုပ်ထားတော့နဲ့ Gear အဆိုပါ CL215 မှလွဲ. အခြားလေယာဉ်ပျံများအတွက် G. အဖို့ဒီအလုပ်ကိုခန့်ထားပြီ။ အခြားသူမည်သူမဆိုဒီတွေ့ကြုံခံစား, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးပြင်ဆင်ချက်ရှိသည်?
နယူး CL215 လုံးဝအလုပ်မလုပ်2နှစ်ပေါင်း3months ago #1049
ငါ CL215 အတွက်ပြေးကြပါပြီ P3Dv4.2 ပြproblemsနာမရှိဘဲ။ ၎င်းကိုလုံးဝဖယ်ထုတ်ပြီး မှလွဲ၍ ဘာပြောရမည်ကိုမသေချာပါ။ အသစ်တစ်ခုကိုကူးယူပြီးပြန်လည်တပ်ဆင်ပါ။
ကံကောင်းပါစေကြောင့်ပျံသန်းဖို့ gre4at လေယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။
နယူး CL215 လုံးဝအလုပ်မလုပ်2နှစ်ပေါင်း3months ago #1050
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘော့။ ဒါကအဆင်ပြေတယ်ဆိုတာသိရတာကောင်းတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ခတ်နှင့်ဂီယာအလုပ်မလုပ်သလဲသေချာမသိပါ ငါကပထမ ဦး ဆုံး loaded တဲ့အခါမှာဂီယာချခဲ့ကြသည်။ ချွတ်ယူသော်လည်းမြှင့် တင်၍ မရ။ ငါအခြားလေယာဉ်ပျံကိုပြောင်းနှင့်ဂီယာမြှင့်လျှင်ငါထို့နောက်ပြန် CL215 သို့သွားနိုင်ပြီးရဲ့ဂီယာလည်းထမြောက်ကြသည်။ ဒါပေမယ့်အခုတော့သူတို့ကိုငါမလျှော့ချနိုင်ဘူး။ ငါ uninstall လုပ်ပြီးပြီပြန် install လုပ်ပြီးပြီဒါပေမယ့်ငါထပ်ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်!
နယူး CL215 လုံးဝအလုပ်မလုပ်2နှစ်ပေါင်း3months ago #1051
အဆိုပါဖိုရမ်ကိုဖတ်ရှုခြင်းမှ, rikoooo ကနေအလုပ်မဖိုင်တွေအကြောင်းကိုမှတ်ချက်အများကြီးရှိခဲ့သည်။
ငါသည်အခြား site မှ download လုပ်။ သင်ဆဲဒုက္ခရှိပါကဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တစ်ဦးကအခြားရွေးချယ်စရာဒေါင်းလုပ်စမ်းပါ။
နယူး CL215 လုံးဝအလုပ်မလုပ်2နှစ်ပေါင်း2months ago #1053
Rikoooo ထဲကဖိုင်တွေကိုအခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များကနေထက်အတိအကျအတူတူပါပဲ, တစ်ခုတည်းသောခြားနားချက်အလိုအလျောက် installer ကိုကန့်, လက်ျာဖိုလ်ဒါထဲမှာအလိုအလြောကျဖိုင်များကိုလှုံ့ဆျောသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ တခြားနေရာကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်မလိုပါ။
အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲမစုံလနှင့်ပြဿနာများကိုအများစုက Readme.txt သို့မဟုတ်လက်စွဲစာအုပ်ရှင်းပြနေကြတယ်, ပေမယ့်ဒါဟာလူအများစုဖတ်ရှုဖို့နှောင့်ရှက်ကြဘူးကြောင်း, အချို့ကိစ္စများရှိသည်ဖို့ပုံမှန်ဖွင့်, ဒီမှာကယ့်ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။
0.222 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်